Shiinaha GS jilicsan & Heerkulka Hoose P OF Shrink warshad filim iyo soosaarayaasha | GS PACK
Filimka 'GS Soft & Low Heature Polyolefin Shrink Film' waa nooc ka mid ah waxqabadka sare ee yareynta filimada, wuxuu leeyahay dhamaan sifooyinka wanaagsan ee filimkeena P OF ee hoos u dhaca heerka, Dhanka kale wuxuu leeyahay xoog hoos u dhac, dabeecad hoos udhac ah iyo hoos u dhac aad u fiican iyo waxyaabo kale. Markaa waxay soo xirxiran kartaa walxaha jilicsan, qaabka aan fiicnayn iyo kuleylka xasaasiga ah It.The.The Perfect & waxqabadka sare yaraanshaha heerkulka ku dhowaad waa isku mid sida filimada yarayn PVC.
Filimka 'GS Soft & Low Heature Polyolefin Shrink Film' waa nooc ka mid ah waxqabadka sare ee yareynta filimada, wuxuu leeyahay dhamaan sifooyinka wanaagsan ee filimkeena P OF ee hoos u dhaca heerka, Dhanka kale wuxuu leeyahay xoog hoos u dhac, dabeecad hoos udhac ah iyo hoos u dhac aad u fiican iyo waxyaabo kale. Markaa way xirxiran kartaa walxaha jilicsan, qaabka qariibka ah iyo Alaabta xasaasiga ah. Heerkulka yaraanta waxqabadka 'Perfect & high' wuxuu kudhowaad la mid yahay filimada yareynta PVC. Waxqabadkeeda yaraanshaha gaarka ah wuxuu ka hooseeyaa 120 ℃. Iyada oo si dhakhso leh u yaraanaya xoogga iyo xoogga shaabadda wanaagsan iyo caabbinta ilmada ee xoogga leh. Inta lagu jiro baakadka, yaraanshaha wuxuu gaari karaa in kabadan 70% .Bakhshadeynta kadib, waxay kaloo leedahay dibno aad ufiican iyo waxyaabo isku dhafan oo isku dhafan. Filimkeena jilicsan wuxuu hubiyaa baakadka inuu xasilloon yahay wuxuuna hubiyaa waxqabadka baakadka inuu aad u fiican yahay. Filimkeena jilicsan wuxuu la jaan qaadayaa dhamaan noocyada kala duwan ee mashiinada wax lagu duubo ee waxqabadka leh. Gaar ahaan xawaaraha sare ee mashiinnada wax lagu duubo ee iskudhafka Auto-matic.
GS jilicsan & Heerkulka Hoose Polyolefin Shrink Film
Dhumucdiisuna Micron ASTM-D 374 15um 19um 25um
Cufnaanta g / cm3 ASTM-D 1505 0.91 0.91 0.91
Dheeraynta MD % ASTM-D 882 120 120 120
Awoodda siligga MD N / mm2 ASTM-D 882 95 95 95
Iska caabin ilmada MD N ASTM-D 1938 0.87 1.1 1.2
Xoog Khatimidii N / 15mm Q BT 23-58 12 14 16
Ballaca Gudaha Inji 3 3 3
Faallooyinka ： MD (Jihada mashiinka) D TD (Trany erse direction)
POF filimka yareyn kara
POF waa nooc ka mid ah filimka kuleylka yareyn kara, inta badan loo isticmaalo baakadaha alaabada leh qaabab joogto ah iyo kuwa aan caadi ahayn. Iyada oo ay ugu wacan tahay ilaalinta aan sunta ahayn iyo deegaanka, hufnaanta sare, yaraanshaha sare, kuleylka-ku-xirnaanta wanaagsan, dhalaalaya sare, adkaanta, iska caabbinta ilmada, Waxay leedahay astaamaha kulaylka kulaylka isku midka ah oo ku habboon baakadaha xawaaraha sare leh. Waa badeecad beddel u ah filim dhaqameedka PVC ee kuleylka yareyn kara. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qalabka gawaarida, alaabada caagga ah, qalabka xafiisyada, buugaagta, elektarooniga, looxyada wareega, MP3, VCD, farsamada gacanta, muraayadaha sawirada iyo alaabada kale ee alwaaxa, Alaabta lagu ciyaaro, sunta cayayaanka, baahiyaha maalinlaha ah, cuntada, is qurxinta, cabitaanka qasacadaysan, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, daawo, cajalado iyo cajalado fiidiyoow ah iyo waxyaabo kale.
1. Hufnaan sare iyo dhalaal wanaagsan, oo si cad u soo bandhigi kara muuqaalka sheyga, hagaajinaya dareenka aragtida, kana tarjumeysa dhamaadka-sare.
5. Deegaanka ku habboon, oo aan sun ahayn, oo la jaanqaada heerarka US FDA iyo USDA, isla markaana raashin gelin kara. Qalabka ugu muhiimsan ee saddexda lakab ee isku-darka kuleylka kuleylka filimka baakadaha waxaa ka mid ah LLDPE (polyethylene low-density), TPP (ternary copolymer polypropylene), PPC (binary copolymer polypropylene) iyo waxyaabo lagu daro oo muhiim u ah sida wakiilka Shuang Slip, anti Waxyaabahan ceyriinka ah ayaa ah kuwo deegaanka u fiican oo aan sun ahayn, ma jirto wax gaas ama ur ur ah oo la soo saari doono inta lagu guda jiro ka shaqeynta iyo soosaarida alaabta, iyo waxqabadka sheybaarka ee alaabtu waxay la kulantaa heerarka US FDA iyo USDA, waana awoodaa loo isticmaalaa in lagu rakibo cuntada.
Wax-soo-saarka wax-ka-beddelka Wax-soo-saarka Seddex-lakab oo isku-darka kuleylka kuleylka filimka baakadka laga dhigi karo wuxuu ka sameysan yahay polyetylen cufnaan hooseeya (LLDPE) iyo polypropylene copolymer (TPP, PPC) oo ah maaddooyinka ugu muhiimsan ee cayriin, iyadoo lagu darayo waxyaabaha lagu daro ee lagama maarmaanka u ah, laguna farsameeyo wax-ka-qabashada dharbaaxo isku-darka ah. Nidaamku wuu ka duwan yahay habka wax u sameynta dharbaaxo dhaqameed. Sababtoo ah sifooyinka liidashada ee liidata ee xaaladda dhalaalka ee 'PP', habka wax taaj oo kale ee dharbaaxo looma isticmaali karo. Taabadalkeed, geedi socodka xumbo labalaabka ah ayaa loo adeegsadaa, kaas oo sidoo kale loo yaqaan geedi socodka Pulandi ee adduunka. Waxaa dhalaalay oo soo saaray soosaarayaal kala duwan, iyada oo loo marayo madaxa sida gaarka ah loo naqshadeeyay ee loo yaqaan 'co-extrusion die head', filimka aasaasiga ah ayaa la sameeyaa ka dibna la demiyaa, ka dibna loo kululeeyaa sicir bararka labaad iyo fidinta si loo helo badeecada.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee wax soo saarka tafatirka
Filim saddex-lakab oo wada-qaboojiye ah ayaa laga soo saari karaa qeexitaanno kala duwan sida ku xusan arjiga. Dhumucda guud waxay u dhaxeysaa 12μm ilaa 30μm. Dhumucda guud waa 12μm, 15μm, 19μm, 25μm, iwm. Qeexitaannada ballaadhku waxay kuxiran yihiin mugga baakadka. Iska caabinta qabow Filimka baakadaha kuleylka-yareyn kara ee saddexda lakab ah ayaa ah mid jilicsan -50 ° C, oo aan lahayn jajabnaan, wuxuuna ku habboon yahay keydinta iyo daabulidda alaabada xirmaysan ee jawiga qabow. Waxqabadka nadaafadda Alaabta ceyriinka ah ee loo isticmaalay saddexda lakab ee isku-darka kuleylka filimka baakadka la cabbiro dhammaantood waa alaab aan u wanaagsaneyn sunta aan sunta ahayn, iyo habka wax-u-qabashada iyo isticmaalka waa nadaafad iyo sun aan sun ahayn, iyadoo la raacayo heerarka qaran ee FDA iyo USDA. loo isticmaalo baakadaha cuntada.
Tafatirka rajada dalabka
POF filimka wax lagu shubo ee kuleylka yareyn kara wuxuu leeyahay adeegsiyo kala duwan, suuq balaaran, wuxuuna leeyahay faa iidooyinka ilaalinta deegaanka iyo sunta aan sunta ahayn. Sidaa darteed, waxay heshay feejignaan ballaaran oo ka timid dalalka horumaray ee adduunka waxayna asal ahaan beddeshay filimka baakadka kuleylka ah ee kuleylka ah ee loo yaqaan 'PVC' oo ah sheyga guud ee qalabka baakadaha kulaylka yareyn kara. Soo-saarista taxanaha alaabtan ee waddankeyga waxay bilaabatay bartamihii 1990-meeyadii. Waqtigan xaadirka ah, in ka badan toban xariiq oo wax soo saar ayaa ka jira Shiinaha, dhammaantoodna waa qalab dibedda laga keenay, wadar ahaanna wax soo saarkeedu waa ilaa 20,000 tan. Farqiga gaar ah ee u dhexeeya tikniyoolajiyadda baakadka ee waddankayga iyo kuwa caalamiga ah ee horumarsan, dalabka saddexda lakab ee isku-darka isku-darka ah ee filimada baakadaha ee kuleylka-yareyn kara ee Shiinaha ayaa weli ku jira heer horudhac ah, baaxadda codsiguna wali wey cidhiidhi tahay, ku kooban cabitaannada, alaabada maqalka iyo muuqaalka leh, cuntooyinka ku habboon iyo in yar oo ka mid ah wax soo saarka kiimikada maalin kasta Meelo kooban, dalabka sanadlaha ah wuxuu ku saabsan yahay 2 ilaa 50,000 illaa 30,000 tan.
Noocyada filimka kuleylka yareyn kara
Waxyaabaha loo isticmaalo filimyada kuleylka yareyn kara badanaa filimada kuleylka kuleylka leh. Markii hore, filimka yareynta PVC ayaa badanaa la isticmaalay. Horumarka joogtada ah ee baahida suuqa, filimka PVC ayaa si tartiib tartiib ah u yaraaday, iyo filimada kala duwan ee PE, PP, PET, PVDC, POF iyo filimada kale ee iskudhafka kuleylka ee iskudhafka ah ayaa si deg deg ah u horumaray waxayna noqdeen kuwa ugu muhiimsan suuqa. Filinka kuleylka yareyn kara waxaa loo isticmaalaa iibinta iyo daabulida alaabada kala duwan, shaqadiisa ugu weyna waa xasilinta, daboolida iyo ilaalinta sheyga. Filimka yaraanaya waa inuu lahaadaa iska caabbinta daloolka sare, yaraynta wanaagsan iyo culeyska hoos u dhaca qaarkood. Inta lagu guda jiro howsha sii yareysa, filimku ma soo saari karo godad. Maaddaama filimka yareynta badanaa loo isticmaalo banaanka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro wakiilka UV-anti-ultraviolet.
Waxay leedahay dabacsanaan sare, ma fududa in la jabiyo, iska caabin qaraxan oo xoog leh, iska caabin xoogan oo saameyn leh, iska caabin xoog leh oo ilmada ah, xoog silig ah oo xoog leh, waxayna bedeli kartaa baakadaha baakadaha Heerka yaraanshaha waa weyn yahay, walxaha si adag ayaa loo duubi karaa ka dib kuleylka sii yaraanaya. Haddii boorsada-PE ee marin-ka-gudubka (labada geesood ee boorsada ka furan) ay kuleylka yaraato, labada daraf ee furitaanka ayaa kor u qaadi kara walxaha, kuwaas oo qaadi kara culeys dhan 15KG oo si fudud loogu maareeyo. Waxay leedahay daahfurnaan wanaagsan iyo 80% gudbinta iftiinka. Waxay soo bandhigi kartaa alaabada waxayna kor u qaadi kartaa alaabada si aan muuqan. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale yareyneysaa khaladaadka qaybinta ee xiriirka saadka. Qoyaanka-u-adkeyn, biyo-la'aan iyo boodh-caddeyn, ma gaari karo oo keliya saameynta baakadka, laakiin sidoo kale qurux badan oo ilaaliya sheyga. Wax aan sun ahayn, aan dhadhan lahayn, oo aan wasakh lahayn ayaa ah alaabada baakadaha ku habboon ee deegaanka u habboon.
PE baaxadda dalabka filimka yareyn kara: daawooyinka, cabitaanka, biyaha macdanta, biirka, gogosha laminate, palletizing, qalabka dhismaha, alaabada birta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, dhalooyinka quraaradaha ah, waraaqaha warshadaha iyo qalabka baakadaha kale ee baaxadda weyn leh, maqaallada, iwm.
Waxyaalaha Wax Lagu Baako ee Caaga ah ee loo yaqaan 'Juyin Plastic Packaging Products (Shenzhen) Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal ah oo wax soo saarda baakadaha oo isku daraysa R&D, wax soo saar, iib iyo adeeg. Waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah qalabka baakadaha ee bey'adda u fiican, qalabka wax lagu rito iyo agabyada, iyo khadadka xakamaynta otomaatiga baakadaha. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo u heellan cilmi baarista iyo horumarinta agabyada baakadaha ku habboon iyo qalabka baakadaha. Waxay leedahay qaybta dayactirka qalabka ugu badan ee qalabka wax soo saarka ee Shiinaha, oo bixisa adeegyo la-talin oo 24-saac ah.
Hore: GS Standard Polyolefin Shrink Film
Xiga: GS Hot Slip Polyolefin Shrink Film
Filimooyinka Heerkulka Hoose
Polyolefin Shrink Heerkulka Filimka
Polyolefin Iskudhin Heerkulka
Iska Yaree Heerkulka Filimka Duub
Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Duubista Polyolefin Pof, Yaree Filimka PCv, Polyolefin Pof Shrink Film, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Iskudhin Duubista Filimada,